ရွှေတြိဂံနယ်မြေ – Grab Love Story
အချိန်က ၂၀၁၀ ခုနှစ် …။
နေရာ က အမေရိကန်ပြည် ရဲ့ တခုသော ပြည်နယ် က တခုသော .. မြို့တမြို့..။
မြို့စွန် က တိုက်ခန်းတခန်း …ထဲ ။
စောဒိုး သည် လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ဆုတ်ထားသည် ..။
စောဒိုး ..မျက်နှာက ကြောက်စရာကောင်းနေသည် . .။
တင်းမာ..ခက်ထန်နေသည် . .။
မိုင်းမိုင်း သည် စောဒိုးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ထားရင်း . .( စောဒိုး ..နင် အမဲတွေနဲ့ ဖိုက်လာတယ် ဆို . .စိတ်လျော့စမ်းပါ စောဒိုးရယ် . အုန်းပေါက်သေတာ . .နင် လက်စားခြေမနေပါနဲ့ . .သတ်တဲ့ကောင်ကို ပုလိပ်တွေ..ရှာမှာပေါ့ . .စိတ်လျော့..စိတ်လျော့ . .) လို့တတွတ်တွတ် ပြောနေသည် . .။
စောဒိုး မျက်နှာက တင်းမာနေဆဲ . .။ မိုင်းမိုင်း သည် နယ်စပ်မှာထဲက စောဒိုးအကြောင်းကို သိသည် . .။ သူမှန်တယ် ထင်ရင် စိတ်အရမ်းတို သည် .. .. ဒေါသကြီးသည် ..။
သူတို့..တဖက်ကမ်း..ထိုင်းနိုင်ငံထဲ..အလုပ်သွားလုပ်ကြတော့.. ထိုင်းရဲတွေက မိုင်းမိုင်း ကို ကြံစည်ချင်ကြတော့ စောဒိုး က မိုင်းမိုင်းဟာ သူ့မိန်းမ ပါ ဆိုပြီး ရှေ့ကနေ ၀င်ကာ ပေးခဲ့သည် . .။ မိုင်းမိုင်းကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည် . .။
ဒါကြောင့်လဲ.. စောဒိုးနဲ့ မိုင်းမိုင်း နီးစပ်ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာကြသည် ။ ထိုင်းရဲတွေကို သူ ..ပြန် ရန်ဖြစ်ချင်လို့ မိုင်းမိုင်း တားခဲ့ရသည် . .။ သူ ..စောဒိုး
ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူး ..။
နယ်စပ်ဒေသကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို အတူတူ ..
လာခဲ့ကြတဲ့..စောဒိုးရဲ့ သူငယ်ချင်း အုန်းပေါက် သည် ဆဲဗင်းအလဲဗင်း ဆိုတဲ့ ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့ ဆိုင်လေးမှာ အလုပ်ရ တာမှ မကြာသေး …လူမဲတွေ.. ၀င်လုတော့ အုန်းပေါက် ကို ပစ်သတ်သွားကြသည် ..။ဒီအတွက် စောဒိုး စိတ် အ၇မ်းဆိုးနေတာ ဖြစ်သည် ။ သတ်သွားတာ ဘယ်ကအမဲမှန်း သိတာမဟုတ်ဘူး …။ အမဲမြင်ရင် သူက ရိုက်ချင်နေတယ် …။
မိုင်းမိုင်း သည် စောဒိုးအကြောင်းကို အသိဆုံး . .။ စောဒိုး ရဲ့ စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်နေတာကို ဘယ်လို ဖြေလျော့နိုင်မလဲဆိုတာလဲ မိုင်းမိုင်း ဘဲ အသိဆုံးပါ . .။
မိုင်းမိုင်းသည် စောဒိုးကို ဖက်ထားရင်း ..စောဒိုးရဲ့တီရှပ်ထဲ…
လက်သွင်းလိုက်ပြီး..ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို သူမ အရှည်ထားတဲ့လက်သဲတွေနဲ့ ဖွဖွလေး ကုတ်ခြစ်ပေးလိုက်သည် . .။
ဒီလိုကုတ်ခြစ်ပေးရင် စောဒိုး အရမ်းသဘောကျတာ သူမသိလို့ . .။ စောဒိုး သည် မိုင်းမိုင်းထင်သလိုဘဲ …အို..အင်း . .ဆိုတဲ့အသံတွေ ညည်းလာပြီး .မိုင်း မိုင်း ကို တအားပြန်ဖက်လာသည် …။ မိုင်းမိုင်း စောဒိုးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို .. သူမကဘဲစပြီး ဖမ်းဟတ်လိုက်ပြီး စုတ်နမ်း သည် . .။စောဒိုးက အငမ်းမရ .. ပြန်စုတ်နမ်းတာကို တွေ့ရသည် . .။နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုတ်နေတုံး ..မိုင်းမိုင်းသည် သူ့ကျောပြင်ကို ဆက်ပြီး ကုတ်ခြစ်ပေးနေသည် . .။စောဒိုးကြောင့်ဘဲ မိုင်းမိုင်း လက်သဲရှည် ထားဖြစ်သည် . .။
စောဒိုး သည် မိုင်းမိုင်း ၀တ်ထားတဲ့တီရှပ်ကို လှန်ချွတ်လိုက်သည် . .။ ဘရာစီယာဖြူဖြူလေးအောက်ကနို့တင်းတင်းထွားထွားကြီးတွေ..ဘွားကနဲပေါ်လာ သည် . .။မိုင်းမိုင်းက ပြုံးပြုံးလေးမခို့တရို့ နဲ့ ..ဘရာစီယာချိတ်ကို ဖြုတ်ခါ ချွတ်လိုက်သည် . .။ ဖြူဝင်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နို့ကြီးတွေ ဟာ နို့သီးနီညိုညိုလေးတွေ နဲ့ဘရာစီယာရဲ့အနှောင်အဖွဲ့အောက်က…လွတ်ထွက်တာနဲ့..အနည်းငယ်လှုပ်ခါ
စောဒိုး . .နို့တဖက်ကို ငုံ့စို့လိုက်ပြီးကျန်တဖက်ကို ဆုတ်နယ်သည် . .။ အလုပ်ကြမ်းသမား စောဒိုးရဲ့ လက်ဖ၀ါးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ က မိုင်းမိုင်း ရဲ့ နို့သီးခေါင်းနုနုလေးတွေကို ထိပွတ်တာ ..မိုင်းမိုင်း ..ကို တုန်သွားစေသည် . .။ မိုင်းမိုင်းသည် စောဒိုး ကို စိတ်ပြောင်းလိုက်နိုင်လို့ ကျေနပ်မိပြီး . .သူမ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအတိုလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည် ။အဖြူရောင် ပင်တီဘောင်းဘီအပြတ်လေး က နွမ်းလျပြီး ပါးလွန်း တော့မိုင်းမိုင်းရဲ့ ပေါင်ဂွဆုံက အမွှေးေ၇းရေး ကို ဖေါက်မြင်နေရသည် . ။စောဒိုး သည် နို့သီးလေးတွေကို တလှဲ့စီ စို့ပေးနေရာက လက်တဖက်နဲ့ မိုင်းမိုင်းရဲ့ ပေါင်ကြားကို ကိုင်လိုက် သည် . .။
မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ဖေါင်းအိနေသော စောက်ဖုတ်ကြီး သည် အရေတွေ နဲ့ စိုစိုရွှဲနေသည် ။စောဒိုးရဲ့ လက်ညှိုးတုတ်တုတ်ကြီး က စောက်ဖုတ် .. အကွဲကြောင်းအတိုင်း လိုက်စမ်းနေသည် …။
( အာ . .စောဒိုး . . ယားတယ် . .. )
နှုတ်ခမ်းချင်းခဏကွာသွားသည် . .။ အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာသည် . .။( စောဒိုး . .နင် ငါ့ကို မလိုးတာကြာပြီဟာ . .)
စောဒိုး က မိုင်းမိုင်း ..ဖင်တုန်းတွေကို ဆုတ်နယ်နေပြန်သည် . .။ ( အေး..နင် ဖင်တွေ ပိုတောင့်လာပါလား . .နင့်ကို ယောက်ျားတွေ အရမ်းလိုးချင်ကြမှာဘဲ … ….နင် ဘယ်သူနဲ့ လိုးသေးလဲ . .)
( ထွတ် ..ငါ ဘယ်သူနဲ့ လုပ်ရမှာလဲ ..စောဒိုး . .နင် မမိုက်ရိုင်းနဲ့နော် ..) ( တောက်. .နင့်ဖင်တွေ တကယ်တောင့်တယ်ဟာ . .နင် ဖင်ကုန်းပေးပါလား . .နင့်ဖင်တွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး လိုးချင်တယ် . .)
( နင့်သဘော..စောဒိုး . .အရင်ဆုံးနင့်လီးကိုကြည့်ပါရစေအုံး.. . .ကောင်းကောင်း မာနေပြီလား . . .)
စောဒိုးရဲ့ ဘောင်းဘီ အရှေ့ဖက်မှာ ဖုဖေါင်းဖေါင်းကြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရသည် .
.။မိုင်းမိုင်း က စောဒိုးရဲ့ ခါးပတ်ကိုဖြုတ် ..ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဖွင့်သည် . .။ ..ဘောင်းဘီကို ဆွဲချသည် . .။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချသောအခါ စောဒိုးရဲ့ လီးကြီး ဒေါင်းကနဲ ပေါ်လာသည် . .။ ဒါကြီးကိုမြင်တော့ မိုင်းမိုင်းလဲ စိတ်တွေ ထန်းကနဲ ကြွသွားရသည် ။ ဒါကြီးနဲ့ မိုင်းမိုင်း အလိုးခံဘူးတာ အကြိမ်ကြိမ် ဘဲ ..။ သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေတဲ့ ဆားငံရေ .. ဆိုတာပေါ့ . .။ လိုးပြီး ခဏကြာတော့ ..ပြန် လိုးချင်ပြန်ရော . . .။ မိုင်းမိုင်း စောဒိုးရဲ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုသူမလက်ကလေးနဲ့ ..တချက်နှစ်ချက် ပွတ်သပ်လိုက်ပြီး . .ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည် . .။ ဒစ်ကားကားပြဲပြဲကြီးကို ငုံလိုက်သည် . .။
စောဒိုးသည်..မိုင်းမိုင်း..နှုတ်ခမ်းထူထူပြဲပြဲလေးကြားထဲကိုသူ့ဒစ်ကြီး..ရောက်သွား တာကို ငုံ့ကြည့်နေသည် . .။ မိုင်းမိုင်းသည် အင်မတန်မှ ချောသည်လို့ သူထင်သည် . .။မိုင်းမိုင်းအတွက်နဲ့ သူ နယ်စပ်စခန်းမှာတုံး က ခဏခဏ စိတ်တွေ ပူခဲ့ရသည် . .။ မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ပုံစံလေးက အရမ်းမိုက်နေတော့ ယောက်ျားတွေ က ချောင်းနေတတ်ကြသည် . .။
မိုင်းမိုင်း၇ဲ့ အလှအပတွေကို သူ ခံစားနေချိန် မိုင်းမိုင်းသည် သူ့ လီးကို စုတ်ပေးနေပြီ . .။ မိုင်းမိုင်းသည် လီးစုတ်အရမ်းတော်နေပြီ ..။ တခါတလေ..သူ မိုင်းမိုင်း ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးသွားတတ် သည် . .။ မိုင်းမိုင်း သည် အရမ်းသဘောကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး ဖြစ်သည် . .။ သူ့သုတ်တွေ ပါးစပ်အပြည့် ကို ထွေးမထုတ်ဘဲ အားလုံးမြိုချပစ်သည် . .။ သူ့ကို မိုင်းမိုင်း တကယ်ဘဲ ချစ်သည် လို့ စောဒိုး ထင် သည် . .။
မိုင်းမိုင်း သည် လီးတန်ရဲ့ အရင်းအထိ ငုံကာ စုတ် သည် . . ။ စောဒိုး သည် သူ့ လီးသည် တော်တော်ရှည်တဲ့ လီး ဆိုတာ သူသိသည် . .။ မိုင်းမိုင်းက လီးအရင်းအထိ သူမ ပါးစပ်ထဲ ငုံနိုင်လို့ အံ့သြနေသည် . .။မိုင်း မိုင်းသည် သူ့ ဂွေးစိနှစ်လုံးကိုလဲ ဖွဖွလေးချေနယ်ပေးသည် . .။ မိုင်းမိုင်း သည် သူမ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ..သူ့ကို
လီးကောင်းကောင်းစုတ်ပေးသည် . .။မိုင်းမိုင်း စုတ်ပေးတာကိုလဲ သူ အရမ်းကြိုက်သည် . .။
အခုလဲ မိုင်းမိုင်းသည် သူမလျာလေးကို အငြိမ်မနေဘဲ လီးတန်ရဲ့ ဒစ်ကြား နဲ့ ထိပ်ပေါက်လေး ကို ထိုးကစားနေတော့ စောဒိုး ..အရမ်း ကောင်းလာပြီး ပြီးသွားမှာ စိုးလာသည် . .။ ပြီးသွားရင် မိုင်းမိုင်း ကို မလိုး လိုက်ရမှာစိုးလို့ ..( တော်ပြီ. . ရပ်တော့ . .ဒို့ လိုးကြရအောင် . .) လို့ ပြောရင်း သူ့လီးကို မိုင်းမိုင်း ပါးစပ်ထဲက ဆွဲနုတ်လိုက်သည် ။ ( ပြီးရင် ပြီးပါစေ ပေါ့ .. .မိုင်းက အပြီး စုတ်ပေးချင်တာ . ..)
မိုင်းမိုင်းလဲ သူမ ပင်တီနွမ်းလေးကို ချွတ်ချလိုက် သည် . .။
ဖြူဝင်းတောင့်တင်းသော သူမကိုယ် အောက်ပိုင်း အလှအပတွေကို စောဒိုး ကြည့်ကာသဘောကျပြီး..ဖင်ကားကားတွေကိုဖန်းကနဲဖန်းကနဲ..ရိုက်ထည့်လိုက် သည် ..။
အို့..စောဒိုး ..ဘာလို့ရိုက်တာလဲ . .
မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ပြောလိုက်သော မိုင်းမိုင်းကို စောဒိုး တဟဲဟဲ နဲ့ ရယ်မော သဘောကျရင်း သူမ ပေါင်ဂွဆုံက စောက်ဖုတ်ကြီးကို .. လှမ်းစမ်းလိုက်သည် . .။
မိုင်းမိုင်းရဲ့ခုံးမောက်ကာကြွနေသော…စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံး အရေကြည်တွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေလေရာ . .စောဒိုးလဲ..မိုင်းမိုင်း အရမ်းထန်နေပြီ ဆိုတာ သိနေပြီ . .။ ..မိုင်းမိုင်း စောက်ဖုတ်ကို ခါတိုင်းလို ယက်မပေးတော့ဘဲ ..လိုးဘဲလိုးတော့မည် လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခါ မိုင်းမိုင်းကို ကုန်းပေးဖို့ ပြောလိုက်ပါသည် . .။မိုင်းမိုင်းကလဲ ချစ်သူ အလိုကျ …ဆိုဖါပေါ်ဒူးထောက်ခါ ဖင်ကြီးတွေ ကို ကုန်းပေးလိုက်တော့ မိုင်းမိုင်းရဲ့ ဖင်တွေကြားက စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပြူးထွက်နေကာ စောဒိုး လိုးဖို့ အဆင်သင့်အနေအထား ရှိနေပြီ . .။ မိုင်းမိုင်းရဲ့ စအိုဖင်ပေါက် နီနီလေး ကိုကြည့်ပြီးလဲ စောဒိုး သည် အသဲယားလာသည် . .။ မိုင်းမိုင်း ကို သူ ဖင်တခါမှ မလိုးဘူးသေး ..။
အမေရိကန်အပြာကားတွေ..မှာ ဖင်လိုးတာတွေ တွေ့ဘူးရတော့ စောဒိုး ..ဖင်လိုး…စမ်းချင်စိတ် ရှိနေခဲ့ သည် . .။ မိုင်းမိုင်းကို တခါ စကားစကြည့်တော့ မိုင်းမိုင်းက ..စောက်ပတ်ပေးလိုးနေတာကို အေးအေးဆေးဆေး ..စောက်ပတ်ဘဲ လိုးပါဟာ.. …..ဖင်ဆိုတာက ONLY EXIT အတွက်..ဘဲ ..စောဒိုး …ထွက်ဖို့ဘဲ …ဖင်တော့ မလိုးပါနဲ့ဟာ . .တဲ့ …။
သူ့လီးဒစ်ပြဲကြီးကို မိုင်းမိုင်း စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ထဲ နစ်မြုပ်လိုက်သည် အာ..အိ . . ..
တင်းကနဲ ဒစ်ပြဲကြီး ..သူမစောက်ပတ်ထဲ ၀င်လာလို့မိုင်းမိုင်း တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် . .။ ထူပြဲပြဲ နှုတ်ခမ်းလေး ဟသွားရသည် . .။ ( ဖြေးဖြေး . .)
စောဒိုး က ..မိုင်းမိုင်း ခါးလေးကနေဆွဲကိုင်ပြီး ဖိထည့်လိုက်သည် . .။ သွင်းလိုက်သည် . ။စောက်ဖုတ် အတွင်းသားနုနုတွေကို တဖျစ်ဖျစ် တိုးပွတ်ခါ ၀င်သွားတာကြောင့် မိုင်းမိုင်း ..တအားအီဆိမ့်အရသာတွေ့သွားရ သည် ..။ တော်တော်လီးကြီးတဲ့ စောဒိုး . .စောက်ပတ်ထဲ ပြည့်ကျပ်နေတာဘဲ …။ . .သူမစိတ်ထဲ ပီတိဖြစ်ကျေနပ် သလို . .မခံရတာကြာပြီမို့ အားရပါးရ ခံလိုက်ဦးမည်လို့လဲ စဉ်းစားနေသည် ။
စောဒိုး လိုးပြီ . .။
မိုင်းမိုင်း ကို လီးတဆုံး ..အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လိုးသည် . .။ ဒီလိုဖင်ကုန်းပုံစံနဲ့ လီးတဆုံး ဆောင့်လိုးရင် သားအိမ်ကို ထိပြီး အောင့်ပေမဲ့ မိုင်းမိုင်းလဲ ချစ်သူကို ဘာမှ မတားချင်လို့ ..တအားအားနဲ့ အောင့်ကာ ခံ သည် . .။ စောဒိုးလဲ အားရပါး၇ ကို ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့သည် . ..။မိုင်းမိုင်း နို့တွေကို အနောက်ကနေ လှမ်းဆုတ်ကိုင်ပြန်သည် . .။ လိုးတာကတော့ မလျော့ . .။စောဒိုးရဲ့ ဖင်တွေ ခွက်ဝင်နေအောင်ကို ညှောင့်နေတာ . .။ ဖတ်..ဖတ်..ဖွတ်..ဖွတ် နဲ့ အသားချင်းရိုက်ခတ်သံတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်နဲ့ လီး .. အ၀င်အထွက် အသံတွေ . …ထွက်နေသည် . .။
( အား..ဟီး . .. .ကောင်းတယ်..စောဒိုး . .ဆောင့်…ဆောင့် . .တအား…တအား ) စောဒိုးလဲ လိုးညှောင့်နေရင်းမိုင်းမိုင်းရဲ့ ဖင်စအိုပေါက်လေးကို လက်မ နဲ့ .. ထိုးကလိနေသည် . .။မိုင်းမိုင်း က ..( စောဒိုး ..နင်ပြီးချင်ပြီးလိုက်နော် .. ငါပြီးတာ နှစ်ခါရှိပြီ . . .)လို့ ပြောတာနဲ့ စောဒိုးလဲ အသားကုန် ဆက်တိုက် … ဆောင့်လိုးလေပြီ . .။
တချက်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲက လေအံသံ ..ဗွီး ကနဲ ထွက်လာလို့ မိုင်းမိုင်းလဲ တခစ်ခစ် ..ရယ် သည် ..။
စောဒိုး က အလိုးမပျက် ..။ဆက်တိုက် ဆောင့်ဆောင့် လိုးသည် .. ။ ဖွတ်ဖပ်..ဖွတ်ဖပ် . .အသံတွေ ဒလစပ် ကြားနေရသည် …။
မကြာခင်ဘဲ . ..သုတ်ရေတွေ ဒလစပ် ပန်းထုတ်ရင်း . .ကာမပန်းတိုင် ပြီးခြင်းကို ရောက်၇ှိသွားလေတော့သည် . ..။
မိုင်းမိုင်း သည် သူ့ကိုပြုံးပြုံးလေး …သမင်လည်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင်း(ပြီးသွားပြီလား . .ကောင်းလား . . ) လို့မေးသည် . .။
( အရမ်းကောင်းတယ် . . )
စောဒိုးလဲ သူ့လီးကို မထုတ်ချင်ထုတ်ချင်နဲ့ မိုင်းမိုင်း စောက်ပတ်ထဲက ထုတ်လိုက်ရင်း . .ပြောလိုက်သည် . .။
ဖရီဒါ အလုပ်က ပြန်လာတော့ အတူတူနေသော မိုင်းမိုင်း ကို ဦးနေမင်း ဆိုတဲ့ လူကြီးနဲ့ အတူတူ တွေ့ သည် . .။ဖရီဒါ နဲ့ မိုင်းမိုင်း သည် မြန်မာပြည်ထဲကစခန်းတခုထဲအတူတူနေခဲ့ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံထဲ..အလုပ်ဝင်လုပ်ကြေ တာ့လဲ အတူတူဘဲ . .။ပြောမနာဆိုမနာ ..ညီအမ အရင်းတွေလိုဘဲ … ခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပါ . .။
ဖရီဒါ နဲ့ မိုင်းမိုင်း သည် တယောက်နဲ့တယောက် ..အစစ ပွင့်လင်းတဲ့
ဘာမှထိန်ချန်ထားတာ မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပါ . .။စောဒိုး နဲ့ မိုင်းမိုင်း ဖရီဒါ ရှေ့မှာဘဲ ချစ်သူ ဖြစ်သွားကြတာ ဖြစ်သည် ။
ဖရီဒါ သည် မိုးအလင်းဆိုင် ခေါ် ၂၄နာရီ ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်တဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေသည် . .။မိုင်းမိုင်း ဆီ အမြဲ လာနေသော ဦးနေမင်း ကို ဖ၇ီဒါ သိပ် မင်္သကာဘူး ..။ မိုင်းမိုင်း က အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေး ဆိုတော့ အဲဒီ ဦးနေမင်းကြီး က ကြိုက်နေလို့ ဖြစ်မည် လို့ ဖရီဒါ ထင်မိတာဘဲ . .။
“ အန်ကယ့်ကို ကျေးဇူး အရမ်းတင်တာဘဲ …အန်ကယ့်ကျေးဇူးတွေ ဘယ်လို ပြန်ဆပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး . . .”
မိုင်းမိုင်း က ဦးနေမင်း ရဲ့ လက်ကို ဆုတ်ကိုင်ပြီး ပြောလိုက်သည် ။ ဦးနေမင်း က ပြုံးပြုံးကြီး နဲ့ …“ ယူအာဝဲလ်ကမ်း ပါ . .မိုင်းမိုင်းတို့ကို အခုလို ကူညီခွင့်ရတာကိုဘဲ ..ကျနော်က ၀မ်းသာလှပါပြီ . . .”လို့ ပြောပါ သည် …။ မိုင်းမိုင်းတို့ ဒီတိုင်းပြည် ရောက်ရောက်ချင်းထဲက ဦးနေမင်းသည် မိုင်းမိုင်းတို့ လိုအပ်တာတွေ အားလုံးကို အစစ လိုက်လံ ကူညီခဲ့ သည် ။ ဦးနေမင်း က ဒီတိုင်းပြည်ကို ရောက်နေတာ ကြာပြီ ..။
လူပျိုကြီး..ဖြစ်ပြီး . .တယောက်ထဲနေသူ ဖြစ်သည် ။ မိုင်းမိုင်းတို့ကို ..ဦးနေမင်းက ဘာလိုလိုလုပ်ပေးသည်…။
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး..မသိတာရှိရင်လဲ.သင်ပေး..ပြပေးသည်။..လူဝင်မှုဌာန ကစာတွေလာရင်လဲဦးနေမင်းကဘဲဖတ်ပြီး..ဘာသာပြန်ပြပေးသည် ။ မိုင်းမိုင်းတို့က အန်ကယ်ခေါ်ကြပေမဲ့ ဦးနေမင်း သည် အသက် ၄၀ .. မပြည့်သေး ..။၄၀ နားကပ်နေပေမဲ့. .သူ့ကိုယ်သူ၃၀ကျော်လို့အမြဲ..ပြောတတ်သူ ဖြစ်သည် . .။
အခုလတ်တလောဦးနေမင်းတယောက်..မိုင်းမိုင်းကို..ကောင်းလိုက်ပုံများ က မိုင်းမိုင်း ..စိတ်ထဲက ဖြစ်ချင်နေတာများ . .အားလုံးကို ဦးနေမင်းက ..ဖြစ်အောင် လုပ်ပေး နေတာ . .။ မိုင်းမိုင်းလိုချင်တာတွေကိုသူကိုယ်တိုင် ..လိုက်ဝယ်ပေးသည်
. .။ ချေးတာမဟုတ် ..။ ပြန်ဆပ်စရာမလိုဘူး ..တဲ့ ။
မိုင်းမိုင်း သည် ငယ်ငယ်လေးထဲက အဖေ မရှိတော့ဘဲ မုဆိုးမ အမေ နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်သည် . ။ အဖေမရှိ ..ဦးလေး..ဘကြီး မရှိ …။ အခုလို .. ဦးနေမင်းက သူမအပေါ် အရမ်းဂရုစိုက်တော့ မိုင်းမိုင်း ပျော် သည် ။ဦးနေမင်း ကို မိုင်းမိုင်း အရမ်း ခင်မိသည် ..။
မိုင်းမိုင်းနဲ့ ဦးနေမင်း တို့ရဲ့ ခင်မင်မှုကို သိတဲ့ဖရီးဒါ ကစပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ . . (မိုင်းမိုင်း.ကြည့်၇တာ..အန်ကယ်နေမင်းကရွှေတြိဂံနယ်မြေဒေသကို..စိုးမိုးချင်တယ် နဲ့ တူတယ် . .) လို့ ပြောသည် .. ။
မိုင်းမိုင်းကသဘောမပေါက်လို့(ဘာ…ဘာပြောတယ်…ဖရီးဒါ.. .. .ဘာလဲဟ..ရွှေတြိဂံ နယ်မြေဆိုတာ . .အန်ကယ် က ရွှေတြိဂံ နဲ့ဘာ ဆိုင်လဲ . .)
ဖရီဒါ က ရယ်မောနေသည် . .။
( ရှမ်းပြည်က ရွှေတြိဂံ နယ်မြေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး . .ငါဆိုလိုတာက နင့် ပေါင်ကြားက တြိဂံပုံ နယ်မြေလေးကို ပြောတာ . .နင်က ရွှေမ ( မြန်မာပြည်က) လေ . .ဒီတော့ နင့်ပေါင်ကြားက တြိဂံနယ်မြေလေး က ရွှေတြိဂံနယ်မြေပေါ့ . . အန်ကယ်နေမင်း
ကနင့်အပေါ်သိပ်ကောင်းနေတာ..နင့်..ရွှေတြိဂံနယ်မြေလေး ကို စိုးမိုးသိမ်းပိုက်ချင်လို့ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောတာပါ . . )
( အို…ဖရီးဒါရယ် . .ကဗျာဆန်နေလိုက်တာ ..စောက်ပတ် ကိုများ ..ရွှေတြိဂံ တဲ့ . .ဟီးဟီး …)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်..ဘယ်သူတွေ ဘာဘဲ ထင်ထင် ..မိုင်းမိုင်း သည် ဦးနေမင်းကို တကယ်ဘဲ..ကျေးဇူးတင်တာပါ . .။
အထူးသဖြင့် သူ့ရီးစား စောဒိုးကို ကူညီတဲ့အတွက် ဦးနေမင်း ကို .. ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်မှန်းမသိဘူး…။
.စောဒိုးက..သူများတွေလို.. . .စားသောက်ဆိုင်တွေ..ဆူရှီဆိုင်တွေမှာ..မလုပ်ချင်ဘူး ..။စောဒိုး လုပ်ချင်တာတွေက သူတို့ရောက်နေတဲ့ ပြည်နယ်မှာ မရှိဘူး . .။ မိုင်းမိုင်း က ဦးနေမင်း ကို အကူအညီတောင်း သည် ..။ ဦးနေမင်း က စောဒိုး ဖြစ်ချင်နေတာများ ကို ဖြစ်အောင် ကူညီလိုက် သည် . .။ စောဒိုး သူလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ရသွားသည် . .။
တခြားပြည်နယ်တခုကို စောဒိုး ပြောင်းသွားရသည် . .။
မိုင်းမိုင်း က စောဒိုး ခုလို တခြားပြည်နယ်ကို ပြောင်းသွားတာ သဘောကျ သည် ..။ စောဒိုး သည် သူတို့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမဲတွေနဲ့ ညိထားခဲ့သည် ..။ စောဒိုး လူမုန်းများနေသည် ..။ သူ့ကို ..တနေ့ လူမဲတွေ ရန်ပြုကြမှာ စိုးသည် ..။
စောဒိုးက..ငွေစုပြီး..မိုင်းမိုင်းနဲ့လက်ထပ်ရန်..ပြန်လာခဲ့မည်ဆိုပြီး..ပြောင်းသွား သည် ။
ဦးနေမင်းက မိုင်းမိုင်း ကို ဒီနေ့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ၀ယ်ပေးသည် .။ မိုင်းမိုင်း လိုချင်တဲ့နှုတ်ခမ်းနီ ..မိတ်ကပ်တွေ..အ၀တ်အစားတွေ ၀ယ်ပေးသည် . .။ မိုင်မိုင်း တခါမှ မစားဘူးတဲ့ (ပုဇွန်ထုပ်နီ) ဆိုတဲ့ ပင်လယ်စာဆိုင်ကိုလဲ ခေါ်သွားပြီး ကျွေးသည် ။ တီဗွီကြော်ငြာမှာ အမြဲတွေ့ဘူးနေတဲ့ အနီရောင် ပုဇွန်ထုပ်ကြီး..ကိုအပြင်မှာ..တကယ်စားရလို့..မိုင်းမိုင်း..သိပ်သဘောကျပြီးပျော် သည် . .။
ဘိုက်တင်းတာမှ ..အရမ်းဘဲ …။
ဦးနေမင်းက မိုင်းမိုင်းကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့သည် ..။ ဒီနေ့ အိမ်မှာ ညပိုင်း ဖရီဒါ မရှိ . .။ ညဆိုင်း လုပ်နေရလို့ မနက် အစောကြီး မှ ပြန်လာမည် ။ ( အန်ကယ် . . အိမ်ထဲ ၀င်ပါအုံးလား . .)
( ကောင်းပြီ. .ဒါနဲ့ မိုင်းမိုင်းရဲ့ ကွန်ပြူတာ ..နဲနဲ လုပ်ချင်တာ ရှိတယ်ဆို . . .) ( ဟုတ်တယ် . .အန်ကယ် . .အားတော့နာတယ် . .ခဏ ကြည့်ပေးနိုင်မလား . .) ဦးနေမင်း အိမ်ထဲလိုက်လာသည် . .။ အတွင်းခန်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဆီကို
မိုင်းမိုင်းက ဦးနေမင်းကို ခေါ်လာ သည် . .။
မိုင်းမိုင်း ကွန်ပြူတာမှာ မိုင်းမိုင်း မလုပ်တတ်တာတွေ ဦးနေမင်း .. လုပ်ပေးသည် . .။ မိုင်းမိုင်းက (အန်ကယ့်ကိုမြန်မာလဘက်ရည်..ဖျော်တိုက်မယ် . . သောက်မယ် မဟုတ်လား . .)လို့မေးသည် . .။
ဦးနေမင်းက လဲ ပြုံးပြုံးကြီး . .( သောက်မှာပေါ့ . .) လို့ ဖြေသည် . .။ မိုင်းမိုင်း မီးဖိုခန်းဘက် ထွက်သွားသောအခါ ဦးနေမင်းသည် . .မိုင်းမိုင်း ကွန်ပြူတာမှာ သူမ ဘယ်တွေ သွားထားတယ် ဆိုတာကို ရှာကြည့်လေ သည်။ မိုင်းမိုင်း ကို ဦးနေမင်း သဘောကျသည် . .။ မိုင်းမိုင်းသည်
အလွန်လှတဲ့ ကောင်မလေးတယောက် ပါ …။မိုင်းမိုင်း သည် စောဒိုး ဆိုတဲ့ ကောင် နဲ့ ရီးစား ဆိုတာ ကို သိလိုက်ရတဲ့နေ့က ဦးနေမင်း ထမင်းစား မ၀င်ပေ. .။နှမြောသလိုလို ..၀မ်းနည်းသလိုလို ခံစားသွားရ သည် …။ မိုင်းမိုင်း သည် ကြွေရုပ်ကလေးတ၇ုပ်လိုဘဲ လှ သည် ။
အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီ လိုရုပ်မျိုး ဖြစ်ပေမဲ့ အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီ က ပိန်သည် ။ မိုင်းမိုင်း က ပြည့်ပြည့်လေး ….ဖေါင်းဖေါင်းလေး….။
မိုင်းမိုင်းရဲ့. .နှုတ်ခမ်းလေးတွေက အင်ဂျလီနာဂျိုလီ ထက် ပို လှသည် . .။ မိုင်းမိုင်း ကွန်ပြူတာထဲမှာ အရင်က သူမ သွားထားခဲ့တဲ့ ဆိုက်တွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ဦးနေမင်း ..ဖြုန်သွားသည် ..။ မိန်းမ နဲ့ ယောင်္ကျား လိုးနေကြတဲ့ ပုံတွေ . .ဗွီဒီယိုတွေ နဲ့ လိင်အသားပေး ဆိုက်များ …. နဲ့ ယောင်္ကျား လီးပုံများစွာ ကို တွေ့ရလို့ပါဘဲ . .။
ဒီအချိန်မှာမိုင်းမိုင်းသည်..မီးဖိုခန်းထဲမှာလဘက်ရည်ဖျော်ရန်…ရေနွေးတည်ရင်း .. ဖရီဒါ သူမကို ပြောခဲ့တာ ..ပြန်သတိရ စဉ်းစားနေပေ သည် ..။ဦးနေမင်းကြီး က သူမရဲ့ ရွှေတြိဂံ နယ်မြေ ကို စိုးမိုးသိမ်းပိုက်လိုလို့ ဖြစ်မည် …ဆိုတာ ..။
အင်း . .စဉ်းစားမိတာနဲ့ မိုင်းမိုင်း ရင်တွေ ခုန်လာသည် . .။ စောဒိုးကလဲ အနားမှာ မရှိတော့တာကြာပြီ . .။ စောဒိုး နဲ့ နောက်ဆုံး လိင်ဆက်ဆံ ( လိုး ) ကြတာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ . .။ ပေါင်ကြားက သူမရဲ့ ..အင်္ဂါစပ်
စောက်ပတ်ကြိးအတွင်းထဲက..ယားသလိုလို..ခံချင်သလိုလိုနဲ့ . .။ တခါတခါဒီကိစ္စကလဲ..မရတော့ရင်..လိုချင်မိ သည် ။ စားဖူးတဲ့ကလေးက ပို .. ငတ်သည် ..ဆိုသလိုဘဲ . .ဒီလိင်ဆက်ဆံမှုက သောက်လေ သောက်လေ ..ငတ်မပြေ ဆိုသလိုဘဲ . . လုပ်ဖူးနေကျလူက မလုပ်ရတာကြာရင် တောင့်တ သည် . .။မိုင်းမိုင်း သည် စောဒိုး နဲ့ စိတ်ကြိုက် ပုံစံအမျိုးမျိုး နဲ့ ..စိမ်ပြေနပြေ လိုးခဲ့ဘူးတာကြောင့်..ကာမလမ်းဆုံးရောက်ခြင်း ( ပြီးခြင်း ) ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာလဲ သိ သည် ..။..အစိမ်းသက်သက် အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အပျိုမလေး မဟုတ်..။ အခုလဲ တိုက်ခန်း တခုထဲ ..သူမ နဲ့ ဦးနေမင်းသာ ရှိနေတာကြောင့်..သူမရဲ့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိနေရ သည် . .။
သူမနဲ့ ဦးနေမင်း အတွက် ဖျော်လာတဲ့ လဘက်ရည် မတ်ခွက် နှစ် ခွက်ကို ကိုင်ရင်း . .ဦးနေမင်း ရှိရာ သူမ အိပ်ခန်းထဲက စာကြည့်စားပွဲဆီကို .. ပြန်လာသည် …။
ဦးနေမင်း သည်လဲ မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ..အရင်
မိုင်းမိုင်း.. ကြည့်ထား . .၀င်ထားတဲ့ ပုံတွေ . .ဇာတ်လမ်းတွေကို မြင်တွေ့ရပြီး စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နိုးကြွနေရပေ သည် ..။ နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိနေသော အိမ်ခန်းထဲက မိုင်းမိုင်း အိပ်တဲ့ ကုတင်ဘေးမှာ ရောက်နေတာကြောင့် .ကာမစိတ်တွေ ပြင်းထန် .နေရ သည် . .။
( အန်ကယ် . ..လဘက်၇ည် သောက်လိုက်ပါအုံး . . .)
( အေးအေး …ကွန်ပြူတာလဲ အန်ကယ် ..ပြင်ပေးပြီးပြီ …မိုင်းမိုင်း.. ဘာလုပ်ပေးစေချင်သေးလဲ . . .)
( မလုပ်စေချင်ပါဘူး . .အန်ကယ် ကူညီတာတွေ သိပ်များနေပြီ . .ကျေးဇူးအရမ်းတင်တာဘဲ..အန်ကယ် . ..တကယ်ပါ . .)
ဦးနေမင်း က ..မိုင်းမိုင်းရဲ့ လက်ကလေးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် . .။ ( ကျေးဇူးတင်ရင်..အာဘွားပေး . .)
ရုတ်တ၇က် ဆိုတော့ မိုင်းမိုင်းသည် ဦးနေမင်း ဒီလို စလာလိမ့်မယ် လို့
ထင်မထား..တော့ အံ့သြသွားသည် . .။
( အာဘွားလား. . ပေးမှာပေါ့..ပေးရမှာပေါ့ .. လာ . .)
မိုင်းမိုင်းက ဦးနေမင်း ရဲ့ ပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည် . .။ ဦးနေမင်းကလဲ မိုင်းမိုင်း ပါးလေးကို အာဘွားပြန်ပေးသည် . .။ မိုင်းမိုင်းလက်ကိုတော့ သူ မလွှတ် . .။“ ဒီကိုဘဲ အာဘွားပေးအုံး . .”
ဦးနေမင်း က သူ့ နှုတ်ခမ်းကို လက်ညှိုးနဲ့ ပြ သည် . .။
မိုင်းမိုင်း က ကိုယ်လုံးတုန်ပြကာ ပြောလိုက်သည် . .။
“ ဒီလိုပုံစံလေးတွေကို ချစ်နေတာ . . ”
ဦးနေမင်းက ပြောပြောဆိုဆို မိုင်းမိုင်း ခါးလေးကနေဆွဲဖက်ကာ သူမ ..ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကို ဖိကပ်စုတ်ယူ နမ်းလိုက်လေ သည် . .။ ဒီအချိန်မှာ ဦးနေမင်း ရဲ့ ပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီး က ငေါက်ကနဲ … ထထောင်လေသည် . .။ဘောင်းဘီထဲက အတင်း ရုန်းကန်ပြီး ထောင်လာတဲ့ လီးငေါငေါကြီးဟာ ..မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ပေါင်တန်ကို ထောက်မိနေပြီ . .။ ..အတွေ့အကြုံရှိနေပြီး ဖြစ်တဲ့ မိုင်းမိုင်းသည် ဦးနေမင်း ရဲ့ လီးကြီး မာတောင်ကာ သူမကို လာထိမိနေတာ . .သိလိုက်သည် . .။ မိုင်းမိုင်းလဲ ဘာလုပ်၇မှန်းမသိပေမဲ့ ငြိမ်နေသည် . .။ ငြင်းဆန် ရုန်းကန်တာ …တားတာတော့ မလုပ် …။ သူမ စိတ်ထဲ ..စောဒိုး သိသွားရင် ..ဆိုတာလဲ ကြောက်နေသည် .။ စောဒိုးသည် ဒေါသကြီး ..စိတ်ဆတ်တဲက ကောင်မို့ . .သူမ တခြားသူ နဲ့ … ဖြစ်ပျက်ရင် .. သူ ဘယ်လိုနေမလဲ . ..လန့်သလိုဘဲ .. ။ ဒီအချိန်မှာ ဦးနေမင်းက သူမ နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နေရာက ခွါလိုက်ပြီး . .( မိုင်းမိုင်း …ဒို့ကို ပြန်နမ်းလေ . .)လို့ ပြောလိုက်သည် ။
( အန်ကယ် . .ကျမ…ကျမ..မိုင်းမိုင်း . .မိုင်းမိုင်းမှာ..ဟိုဒင်း . .စောဒိုး …ရှိနေ …) သူမ စကား မဆုံးလိုက် ..ဦးနေမင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးက သူမ နှုတ်ခမ်းလေးပေါ် ဖိကပ်လာပြန်သည် . .။မိုင်းမိုင်း အထိအတွေ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ . .။
ဦးနေမင်း နမ်းသမျှကို ခံယူရင်း မျက်လုံးလေး မှိတ်လိုက်သည် . .။ ဆောရီးဘဲ..စောဒိုးရယ် . . ။
ဦးနေမင်း က မိုင်းမိုင်းကို နဘေးမှာကပ်ရက် ဖြစ်နေတဲ့ ကုတင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပါသည် ။ ဦးနေမင်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုမိုင်းမိုင်းလဲပြန်နမ်းစုတ်နေမိရပြီ . ..။ဦးနေမင်း လက်တဖက်က မိုင်းမိုင်းရဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကြီးကို ဆွဲလှန်လိုက်သည် . .။တော်တော်လက်မြန်တဲ့ အန်ကယ် ..ဘဲ ..လို့ မိုင်းမိုင်း စိတ်ထဲ မှတ်ချက်ချတုံး ရှိသေးတယ် ….ဦးနေမင်းသည် သူမ ရဲ့ ပင်တီလေးရဲ့ ဂွဆုံနေရာကို .. ပွတ်နေပါသည် . .။သူ့ လက်ညှိုးကြီးက မိုင်းမိုင်း အဖုတ်ကွဲကြောင်းကို .. ပွတ်စမ်းနေသည် .. ။ အို . . ..အို . ..မိုင်းမိုင်း ပင်တီလေးတခုလုံးက အရေတွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေတာ သူ သိသွားပြီပေါ့ . .ရှက်လိုက်တာဟယ် . .။ ဦးနေမင်း က သူ့ကိုယ်ကြီးကို အောက်လျောချလိုက်ပြီး မိုင်းမိုင်းရဲ့ ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်နေသည် . .။ မိုင်းမိုင်းလဲ စိတွေတွေ နိုးကြွနေပြီ . .။ ဖင်ကိုကြွပြီး..ပင်တီ အလံယ်တကူကျွတ်သွားအောင် ကူညီလိုက်သည် . .။ ဦးနေမင်း က ..( မိုင်းမိုင်း ..ပန်းပွင့်လေးကို ဒို့ နမ်းမယ်နော် . .) လို့ ခွင့်တောင်းသလို ပြောလိုက်သည် . .။ မိုင်းမိုင်းလဲ ..( အင်း …အင်း . .) ဘို့ ခေါင်း ညှိမ့်ပြလိုက်သည် . .။ ဦးနေမင်း က မိုင်းမိုင်း ပေါင်တွေကို ဘေးကို တွန်းခွဲလိုက်ပြီး မိုင်းမိုင်း ပေါင်ဂွကြားမှာ သူ့မျက်နှာကို တိုးကပ်လိုက်သည် . .။ အို…သူ…သူ…ဘာဂျာကိုင်တော့မယ် . .။
ဒီအသိက မိုင်းမိုင်း တကိုယ်လုံးကို တုန်ခါသွားစေ သည် . ။ စောဒိုး နဲ့ ဝေးနေလို့ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ကာမစိတ်တွေ က ဟုန်းကနဲ … ထကြွလာသည် . .
.သူ့လျာကြီးလဲအပြားလိုက်သူမ..စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းပေါ် ဖိဖိကာ ရောက်လာသောအခါ မိုင်းမိုင်းတယောက် ဆတ်ဆတ်ခါနေရပြီ …။မခါ ခံနိုင်မလား . .။
တချိန်လုံး..ခလုပ်တိုက် ပွတ်သပ်မိနေတယ်လေ . . ။ အင်း ..ဦးနေမင်းကြည့်ရတာ လူရိုးကြီးပုံစံနဲ့ အခုတော့လဲ ကုန်းယက်နေတဲ့ ဟာက .. တော်တော့်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပုံ …။
မိုင်းမိုင်း…သည် သူကလျာကြီး ဖိယက်လိုက်တိုင်း တကိုယ်လုံး ကျင်ကျင် သွားလို့ ..သူမဖင်ကြီးတွေ ဟာ တုန်သွားသည် . .။ရမ်းခါသွားကြသည် . .။ ဦးနေမင်းလဲ..မိုင်းမိုင်း ဖင်တုံးတွေကို ဆွဲကိုင်ကာ ယက်သည် . .။ပြတ်…ညပတ် ပလွတ်..ပြတ်..ပြတ် အသံတွေ ညံနေသည် . .။မိုင်းမိုင်း စောက်စိလေးကို သူ့လျာထိပ် နဲ့ မထိတထိလေး ထိုးလိုက် . .လျာနဲ့ ပလပ်ပလပ် … ဆိုပြီးယက်လိုက်..စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကြားကို လျာကြီး ထိုးမွှေလိုက် နဲ့ ရေရေလည်လည် ကလိပေး သည် ။
( အို…အို . . .အဟင် . .ဟင် . . အန်ကယ် . .အရမ်း ကဲတာဘဲ …..ဟင့်…..) ( ကောင်းလား မိုင်းမိုင်း . .အန်ကယ် လုပ်ပေးတာ ကောင်းလား . .) ( အင်း . . .အင်း . . )
ဦးနေမင်း ကုတင်အောက် ဆင်းကာ မတ်တပ်ရပ်ရက်နဲ့ သူ့ ဘောင်းဘီ ကို ချွတ်လိုက် သည် . .။အို . .သူ..သူ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ၀တ်မထား . .။ ဘောင်းဘီရှည် ကျွတ်သွားတာနဲ့ တုတ်ခိုင်ရှည်လျားသောဦးနေမင်း ရဲ့ လီးညိုညိုကြီးကို မိုင်းမိုင်း တွေ့လိုက်ရပါ သည် . .။ သူမ ရီးစား စောဒိုး ထက် .. ပိုတော့ မကြီးလှ ..။တုတ်ချင်ပို တုတ်လိမ့်မယ် ထင်တာဘဲ …။ လီးကြီး က မတ်မတ်တောင်နေသည် ။
စောစောကဦးနေမင်း..ဘာဂျာအစွမ်းပြထားတာကြောင့်လဲ စိတ်တွေ ပြင်းထန်ပြီး ဖြစ်နေတာကြောင့်..သူ့လီးကြီးကိုလဲ မြင်လိုက်ေ၇ာ မိုင်းမိုင်း မှာ ခံချင်စိတ်တွေ တအား . .အရမ်း ဖြစ်ပေါ်သွားလေသည် . .။
ဦးနေမင်းကလဲမိုင်းမိုင်း ရဲ့ ပေါင်တန်၇ှည်တွေကို ဖြဲကားလိုက်ပြီး ..မို့ဖေါင်းတဲ့သူမစောက်ဖုတ်ကြီးကို.သူ့လီးတန်ကြီး ထိုးစိုက် ..သွင်းလိုက်ပါသည်။
နင့်ကနဲ လီးထိပ်ခေါင်းကြီး ၀င်ရောက်လာသည် . .။ အင်း ..အန်ကယ်လ်ကြီး လီးကလဲ စံချိန်မှီပါဘဲ ..ဦးနေမင်းေ၇ွှတြိဂံ နယ်မြေကို သိမ်းပိုက်နေပြီ …။ဂံ နယ်မြေကို ဒလစပ် တိုက်ခိုက်ဖို့ လုပ်နေပြီ …။ မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ဖွံ့ထွား တင်းမာစွာနဲ့ ထောင်ထောင်လေး ရှိနေတဲ့ နို့တွေကို လှမ်း စို့လိုက်ရင်း . .လိုးပါတော့သည် . .။
လီးကြီး တင်းကနဲ စီးပိုင်စွာနဲ့ မိုင်းမိုင်း စောက်ပတ်ထဲ ၀င်သွား သည် …။မိုင်းမိုင်း က ပေါင်တန်တေါကို ပိုပြီး ဖြဲကားပေးလိုက်သည် . .။လီးတန် တ၀က်လောက်အထိ ၀င်သွားပြီးနောက် ဦးနေမင်း သည် လီးကို အသာ .. အနောက်ဆုတ် သည် . .။လီးကြီး အနောက်ကို ပြန် ဆုတ်သွားတော့ မိုင်းမိုင်း ရင်ထဲ ဟာတာတာကြီး ဖြစ်သွားဆဲ . .အို..လီးကြီး ပြန်ဝင်လာပြန်သည် ..။ ဖြေးဖြေးဝင်..ဖြေးဖြေးထွက်…တချက်ချင်း . .လိုးပေး လာသည် . .။ အင်း . . တင်ပြည့်ကျပ်ပြည့်ဘဲ …ကောင်းလိုက်တာ မိုင်းမိုင်းရယ် . . မိုင်းမိုင်း ရဲ့ စောက်ဖုတ် က သူ့လီးကြီးကို ဆုတ်ညှစ်ထားသလိုဘဲ . .။စေးစေးလေး တင်းတင်းလေး ….။
မိုင်းမိုင်းက သူမ ခြေထောက်တွေကို ထောင်မြှောက်ထားနေသည် . .။ ဦးနေမင်းလဲ ..မိုင်းမိုင်း..ခြေထောက်တွေကို သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်လိုက်ပြီး လိုးသည် . .။ အရေတွေတအားရွှဲနေတာကြောင့် လီးသွင်းထည့်လိုက်တိုင်း .. ဘွတ် ..ကနဲ ဆွဲနုတ်လိုက်တိုင်း ….ဖပ်ကနဲ မြည်သည် . .။ ဘွတ်ဖပ် ..အသံတွေ ညံနေသည် ..။ ဦးနေမင်း သည် မိုင်းမိုင်း ရဲ့နို့တွေကို စို့ပေးနေပြန်သည် . .။ ဘယ်ပြီး ညာ . .တလှည့်စီ စို့လိုက် ..လျာနဲ့ ကလိလိုက် လုပ်နေတော့ . . ( အန်ကယ် . .. )
( ဟင်..မိုင်းမိုင်း . . .)
( လုပ်လေ . .ဘာလို့ နှေးသွားတာလဲ . . .လုပ်ပါ . .မြန်မြန် . . .) မိုင်းမိုင်း က အားမလို အားမရ ..အသံလေးနဲ့ ပြောရင်း အောက်ကနေ .. ဖင်တွေကို ကော့ကော့ပေးလိုက်တော့ ဦးနေမင်းလဲ မိုင်းမိုင်း
. .အရှိန်တက်လာပြီ ပြီးချင်လာပြီ ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက် လေ သည် ။ အားသွင်းပြီး ဒလစပ် ..ဆောင့်ပေးပါတော့ သည် …။ အင်းကနဲ ..အင်းကနဲ ..အားယူပြီး ဆောင့်သည် ။မိုင်းမိုင်း လဲ လမ်းဆုံးရောက်ခါနီးလာ ပုံရပြီး တအား အောက်ကနေ.. ကော့ပေးလာသည် ။ရမ်းခါကော့ပေးနေသော မိုင်းမိုင်း ရဲ့.. ဖင်ကြီးတွေကို ဦးနေမင်း လက်နဲ့ဖျစ်ညှစ် ဆုတ်ကိုင်ပြီး တအား .. ဆောင့်လိုးပေးနေသည် . .။ ဦးနေမင်းလဲ မီးကုန် ယမ်းကုန် ဆောင့်ထည့် သည် . .။ မိုင်းမိုင်း အရင် ပြီးသွားသည် .. ။
အို..ဟင်…အိုဟင်…. ……အီးအားအားအား….အင်း . . .လို့ ညည်းရင်း တွန့်လိန် သွား သည် . .။ ဦးနေမင်းလဲ မိုင်းမိုင်း ပြီးသွားတာနဲ့ ဆက် .. ထိန်းမထားတော့ . ..။ သုတ်တွေ မိုင်းမိုင်းရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ..ကို.. ပန်းထုတ်လိုက်ရင်း . .ကာမ လမ်းဆုံး..ပြီးခြင်းကို ရောက်ရှိသွားလေ သည် . . .။
( ကောင်းလား . . )
( သိပ်ကောင်းတာဘဲ..မိုင်းမိုင်း …….မိုင်းမိုင်း ကော ကောင်းလားဟင် …ဒို့ လိုးပေးတာ ကြိုက်လား . .. )
( အင်း . .ကြိုက်တယ် . . .အန်ကယ့်ကို မိုင်းမိုင်း ခိုက်သွားပြီ . . .) ( တကယ်လား . . )
( အင်း …အယက်ကော..အလိုးကော . .ရှယ်ဘဲ . .လီးကလဲ အယ်အယ်ကြီး . .) မိုင်းမိုင်းအပြောကြောင့်..ပျော့ကျသွားတဲ့ ဦးနေမင်း ရဲ့ လီးကြီး . .ဆတ်ကနဲ ခေါင်းပြန်ထောင်ဖို့ လှုပ်လာသည် . .။
မိုင်းမိုင်း စောက်ပတ်ထဲ စိမ်ထားဆဲမို့ လှုပ်သွားတာ ..မိုင်းမိုင်း သိလိုက်သည် ။ ( ဟယ် …အခုဘဲ ပြီးတယ် . .အားကြီးလိုက်တဲ့ ကောင်ကြီး . .) ( မိုင်းမိုင်း က သိပ် မိုက်တာကိုး …မိုင်းမိုင်းက တကယ့် ဆက်က်ဆီ ဘဲ . .) (ကဲ ..လာ ရေသွားဆေးရအောင် . .မိုင်းမိုင်း ဆေးပေးမယ် . .) မိုင်းမိုင်း က ဦးနေမင်း ကို ရေချိုးခန်းကို ခေါ်သွား သည် . .။
လီးကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေသေချာချာ . .ကျကျနန ဆေးကြောပေးသည် . .။
မိုင်းမိုင်း လက်ကလေး နဲ့ လီးကြီး နဲ့ေ၈ွးစိတွေကို ပွတ်သပ် ဆေးကြောပေးတော့ . .ပျော့ကျနေတဲ့ လီးတန်ကြီးဟာ . .ပြန်လည် ထွားကြိုင်း မာကျောလာပါတော့ သည် . .။
( ဟယ်တော့ . .ပြန်မာလာပြီ …အားကောင်းလိုက်တာ . .)
မိုင်းမိုင်း စောစောက မလိုးကြခင်က ဖျော်ပေးပြီး မသောက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာ လဘက်ရည် ကို မိုင်းမိုင်းက ပြန်နွှေး ပေးပြီး နှစ်ယောက်သား သောက်ကြသည် မိုင်းမိုင်းက ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ် လဲ လုပ်ပေး သည် ။စားသောက်အပြီး မှန်တင်ခုံရှေ့ ဆံပင်ဖီးနေတဲ့ မိုင်းမိုင်း ကို ဦးနေမင်း က အနောက်မှ နေပြီး .. ဖက်လိုက်သည် . .။မိုင်းမိုင်း သည် ထမိန်ဟောင်းလေးတထည်ကို ရင်လျားထား သည် ..။ ( မိုင်းမိုင်း .. ထပ်ပြီး ချစ်ကြရအောင် . .)
ဦးနေမင်း ရဲ့ ပြန်လည်တောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်သော လီးညိုညိုကြီးက မိုင်းမိုင်း ရဲ့ ဖင်ကားကားတွေကြားတဲ့တဲ့ ကို ထောက်မိနေပြီ …။ဦးနေမင်း က .. ခါးသိမ်လေးကို ဖက်ထားရာက နို့ကြီးတွေကို ထမိန်အပေါ်ကနေဘဲ ပွတ်သပ် သည် ။
( သူ ..သိပ်ကဲတာဘဲကွာ . ..)
မိုင်းမိုင်းက မျက်စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလိုက်သည် . .။
ဦးနေမင်း က မိုင်းမိုင်း ဖင်ကားကားတွေကို သူ့ လီးကြီးနဲ့ ပွတ်ညှောင့်နေ သည် . .။ မိုင်းမိုင်းလဲ စိတ်တွေ ပြန်ပြီး ထကြွလာ သည် ။
မိုင်းမိုင်း နဲ့ ဦးနေမင်း ..ကုတင်ပေါ် ထိုင်ကြပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း
နမ်းစုတ်ကြ သည် . .။ဦးနေမင်း က မိုင်းမိုင်း ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက် သည် . .။ ဦးနေမင်း သည် မိုင်းမိုင်းရဲ့ ၀တ်လစ်စားလစ် အလှကို တပ်မက်စွာ .. ကြည့်နေရင်း ..မိုင်းမိုင်း ..သိပ်လှတာဘဲ . .ဒို့ နမ်းပါရစေအုံး . .ဆိုပြီး ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းထိုးသွင်းပြီး ..စောက်ပတ်ကို လျာကြီးနဲ့ အပြားလိုက် ယက် ပါတော့ သည် .. ။
( အို..ဟင့်ဟင့် . . ..ရွှေ တြိဂံ နယ်မြေ ကို သိမ်းပိုက် စိုးမိုး ပြန်ပြီပေါ့ . ..)
ဦးနေမင်းဘဲ စောက်ပတ်ကို လျာကြီးနဲ့ ယက်နေရာက ..ခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီး.. ( ဘာပြောတာလဲ မိုင်းမိုင်း . .)
မိုင်းမိုင်းလဲ တခစ်ခစ် ရယ်ပြီး ဖရီဒါ က ရွှေတြိဂံနယ်မြေ လို့ ခေါ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလေ သည် …။
မနက်စောစော ဖရီဒါ အလုပ်က ပြန်လာသောအခါ ..အခန်းထဲ ၀င်ဝင်ချင်း ဖရီဒါ က ..( မိုင်းစုတ် …နင်တို့ ညက ဘာဖြစ်ကြသေးလဲ ..) လို့ မေး သည် ။ မိုင်းမိုင်းက..( အရမ်း. .အရမ်းတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့.. . .ကောင်မ..ရယ်.. ..နင်ပြောတဲ့ ရွှေတြိဂံ နယ်မြေဒေသ ကို ဦးနေမင်းကြီး . .စိုးမိုး သိမ်းပိုက်သွားပြီ ..) လို့ ပြောပြလိုက်သောအခါ ဖရီဒါမှာ . .( ငါ ပြောသားဘဲ )ဆိုပြီးသဘောကျနေသည်။ ( မိုင်းမိုင်း . .ကဲ ပြောပြပါအုံးဟယ် . .ဘယ်နှစ်ခါတောင် လုပ်ကြသလဲ . ..) ( All Night Long …တညလုံး ဘဲ ပေါ့ . .)
( ဟယ် . .တယ်ဆော်ပါလား . .)
( အဟိ ..ကောင်မ..နင် ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့နော် . .စောဒိုး သိလို့ကတော့ ငါ သေမှာ ..)
( နုတ်ပိတ်ခ …မြန်မာဆိုင်မှာ ကျွေးရမယ် . .မိုင်းစုတ် . .)
( ကျွေးပါတယ်ဟာ . .)
( ပြောပါအုံး…ဦးနေမင်းကြီး လီး တော်တော် ကြီးလား . .စောဒိုး နဲ့ ဘယ်သူ ပို ကြီးသလဲ . . .အဟိ …)
( အတူတူလောက်ပါဘဲ . .ကောင်မရယ် . .ဆိုက်က အရေးမကြီးဘူးဆိုတာ နင်လဲ သိသားနဲ့ …ကြီးသည်ငယ်သည် ထိုနှစ်လီ . .ဒေါ်သီ မသိပါ . ကြာကြာလိုးထား ဒီလီးကား..ကောင်းသည်မှတ်ပါလား . .တဲ့ . .)
( အံမယ်..မိုင်းစုတ်က စာသံပေသံနဲ့ .. ဘယ်က တတ်နေလဲ မသိဘူး . .) ( ကြာကြာ ဆွဲထား ..ထိန်းထားပြီး . .မိန်းမ အရင်ပြီးအောင် လိုးနိုင်တာ က ပို ..
အရေးကြီးပါတယ်ဟာ . .)
( ဒီတော့ ..နင်က အန်ကယ် က တော်တော် ကောင်းလား . .) ( အေး . .မထင်ရဘူးဟာ . .ဘာဂျာ ကိုင်တာများ . .ရေရေလည်လည် ကောင်းတယ် . .)
( ဟယ် . .စ်ိတ်ဝင်စားလာပြီ . .)
( ကောင်မ..ငါ ဂျွိုင်းပေးရမလား . .ငါက စောဒိုး ရှိနေတော့ သူနဲ့ပေါ်တင်ကြီး ကဲလို့ မဖြစ်ဘူးဟ …)
( ဟီး..ငါလဲ ဘဲလွတ်နေတာ ကြာပြီဟ . .ဘဲတော့ လိုချင်သား . ..) ( ကောင်မ တော်တော်ရွတယ်. . .နင့် ရွှေတြိဂံနယ်မြေ က .. … တော်တော်ထကြွနေတယ် မဟုတ်လား . ..တွေ့မယ် . .နင် . .လက်နက်ကြီးနဲ့ တွေ့မယ် )
( ဟားဟား . .ဟား . .. )
“” ကူလိုးပါရစေ မမ “”